जोकर अन लन ट्रिक आर 'ट्रेटरहरू - आइहुरोरबाट बाहिर निस्किन्छ
घर हरर मनोरन्जन समाचार जोकर अन लन ट्रिक आर 'ट्रेटरहरूको नरकलाई डराउँदछ
जोकर अन लन ट्रिक आर 'ट्रेटरहरूको नरकलाई डराउँदछ
by व्यवस्थापक सेप्टेम्बर 9, 2015
द्वारा लिखित व्यवस्थापक सेप्टेम्बर 9, 2015
'परिवारको मृत्यु' मा, जोकरले अहिलेसम्म गरेका सबैभन्दा पागल कामहरू गर्दछन्। उसले दयालु कसैलाई आफ्नो अनुहार काट्ने आदेश दिन्छ। त्यसोभए ऊ क्रुद्ध भई यसलाई टाँस्न कोसिस गर्दछ। Kind insane, सही? मेरो मतलब कम्तिमा एउटा सानो बिट?
ठिक ठिक्जीकले जोकरका फ्यानहरूलाई एउटा उपहार दिन्छ जुन दिनेछ। एक अद्भुत जोकर 'परिवारको मृत्यु' बाट आफ्नो दृश्य पछि मोडेल।
यो x 36 x २ x x १० इन्च मौसम प्रतिरोधी क्रिपी लन गहना, ट्रक आर ट्रिटर्सबाट नरकलाई डराउने कुरामा निश्चित छ गोथममा पनि। यसमा जोकरले जंगली आँखा र रिक्टस मुस्कानको साथ लनको पूर्ण बाहिर क्लेइंग सुविधा देखायो। उहाँ मात्र $ is is हुनुहुन्छ र अब खरीद गर्न सकिन्छ यहाँ.
कलाकारले डरलाग्दो चिह्न मनमोहक बच्चाहरूको रूपमा कोर्दछन्
नयाँ फ्रेडी क्रुगर पीओपी! Vinyl Toy Syringe दस्ताने सुविधाहरू